Dalka Canada oo jinsiyadda kala laabtay Hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi – AwKutub News
Dalka Canada oo jinsiyadda kala laabtay Hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi
Leave a Comment on Dalka Canada oo jinsiyadda kala laabtay Hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi
Baarlammaanka dalka Canada ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyey in dhalashada lagala laabto hogaamiyaha dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Labada aqal ee Baarlammaanka Canada ayaa shalay oo Khamiis ahayd isku raacay in Suu Kyi u qalmin haysashada jinsiyad-sharafeed la siiyey sannadkii 2007, maadaama ay ku guul darraysatay wax ka qabasahda xasuuqa lagu hayo bulshada Rohingya-ha.
Hoggaamiyaha Myanmar ayaa qayb ka ahayd lix qof oo Dowladda Canada horay ugu sharaftay jinsiyadda Canada.
Suu Kyi oo sannadkii 1991 ku guulaysatay abaal marinta caalamiga ah ee nabadda, waxay wajahaysaa cadaadis xooggan iyo eedaymo caalami ah, maadaama ay difaacday xasuuqa ciidamada dalkaasi kula kaceen bulshada laga tirada badan yahay ee Rohingya-ha.
Dadkaas oo badankoodu Muslimiin ah ayaa ku nool gobolka xeebta ku dherersan ee Rakhine oo dhaca waqooyiga Myanmar. Tiradooda waxaa lagu qiyaasaa 1.1 milyan oo qof, waxayna ku dhex nool yihiin bulsho aqlabiyaddoodu haystaan diinta Buddhism-ka.
Rohingya looma aqoonsana in ay yihiin muwaadiniin dalkaas u dhashay mana lahan wax xuquuq ah laga soo bilaabo sannadkii 1982.
Tags: Canada Myanmar Wararka
Previous Entry Sucuudiga oo raalli gelin ka dalbaday Canada
Next Entry Xog ku saabsan iskuullada dowladdu lasoo wareegtay